Home Wararka Qeybo kamid ah Dalka Ciraaq oo Bandow lagu soo rogay
Qeybo kamid ah Dalka Ciraaq oo Bandow lagu soo rogay
Dowladda Ciraaq ayaa ku dhawaaqday in ay bandow ku soo rogtay magaalada Basra ee dalkaasi halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen Banaanbaxyo ka dhan ah dowladda.
Bandowgaan waxaa uu socon doona lix maalmood sidda ay sheegtay dowladda.
Xaydar Al-Cabbaadi, Ra’isal wasaaraha Ciraaq ayaa shaaciyey in xukuumaddu sii dayn doonto miisaaniyadda loogu talo galay in wax lagaga qabto biyaha, layrka tiriigga iyo adeegyada caafimaadka ee Basra.
Banaanbaxyaddaan waxa kiciyey caro ka dhalatay shaqo la’aan ka taagan gobolka oo haysata dhalin yarada badankoodka.
Mar sii horraysay ayaa maamulku waxa ay xayireen adeegsiga baraha bulshada ee internet-ka, waxaana heegan sare la geliyey xoogagga nabad gelyada.
Dhawr qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhaawacmeen shaqaaqooyin ku dhex maray Basra iyo magaalooyin kale dadkii dibad baxayey iyo ciidamada nabad gelyada.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo War ka soo Saartay Weerarkii shalay ka dhacay Magaalada Muqdisho
Next articleMadaxweynihii Hore Ee Faransiiska Oo Sharaxay Hawlgalkii Fashilmay Ee Lagu Soo Furan Lahaa Sarkaal Ka Tirsanaa Sirdoonka Oo Ay Alshabaab Horey U Qabteen
Jidadka Muhiimka ah ee Muqdisho oo Saxmad Badan Darteed Sababi Kareysa...
Aqalka Sare oo Maanta Kulankoda Kaga Hadlay Xalada Ka Taagan Magaalada...